Kuwait Oo Xiriirka U Jartay Dowladda Iran
Kuwait ayaa ku biirtay dalalka Saudi Arabia, Sudan, Bahrain iyo Imaaraadka Carabta oo xiriirka u jaray Iran, ama hoos u dhigay.
Kuwait ayaa kula biirtay dalalka kale ee xulufada la ah Saudi Arabia qaadista tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee ka dhanka ah Iran, kadib markii dibadbaxayaal ka carreysan dilka wadaad Shiico ah ay weerareen safaaradda Saudi Arabia ee Tehran.
Wakaaladda wararka Kuwait ee KUNA ayaa sheegtay in Kuwait ay u yeertay safiirkeedii Tehran, ayna ku celisay taageerada ay u heyso dhammaan tallaabooyinka ay qaadday Saudi Arabia ee ay ku sugeyso ammaankeeda.
Tallaabadan, ayaa ka dambeysay markii sidoo kale ay Iran xiriirka diblomaasiyadeed u jareen dalalka Saudi Arabia, Bahrain iyo Sudan, halka Imaaraadka Carabtana ay hoos u dhigeen xiriirka. Dhammaan afartan dal ayaa xubno ka ah ururka Jaamacadda Carabta, oo axadda qaban doono kulan gaar ah oo arrintan ku saabsan.
Dhinaca kale, golaha ammaanka ee QM, ayaa soo saaray bayaan uu ku cambaareynayo weerarkii lagu qaaday safaaradda Saudi Arabia ee magaalada Tehran ee caasimadda Iran.
Golaha ayaa ugu baaqay Iran inay xushmeyso waajibaadka caalamiga ah ee ka saaran inay ilaaliso xarumaha diblomaasiyadeed, waxaana uu dhinacyada ka dalbaday inay xiisadda qaboojiyaan.
Mareykanka "Waan U Dignay Saudi Arabia"
Somalia Oo Taageero U Muujisay Sacuudiga
Xulufada Saudi Arabia Oo Xiriirka U Jaray Iran
Jaamacadda Gaarisa Oo Dib Loo Furay